That's so good, right?: How I BecameaToilet Slave
ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ် မသိပါဘူး။ ကျောင်းသွားတော့လည်း တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတဲ့ ဘဲတွေရဲ့ ပေါင်ဂွဆုံကိုပဲ မျက်စိ ကရောက်ရောက်နေတယ်။ မနေ့ညက ဂျစ်တူး ပို့ပေးလိုက်တဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကြော်ငြာမော်ဒယ်တွေရဲ့ ရေစိုနေတဲ့ အောက်ပိုင်း တွေကို ကြည့်ပြီးကတည်းက ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဖီလင်။ ငပဲခပ်ထွားထွားတွေကိုင်ကြည့်ပြီး ပါးစပ်ထဲထည့် ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်ချင်နေတာ လေ....။
နေ့လည်ပိုင်းကျောင်းကအပြန် အွန်လိုင်းပေါ်တက် Craigslist ထဲဝင်ကာ ဘယ်ငပွေးတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဖို့ အိုကေမလည်း ရှာကြည့်ရ တယ်။ ဟိုသည် ပရိုဖိုင်းတွေမွှေရင်း ခဏနေတော့ တွေ့ပါပြီ ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ရဲ့ အတွင်းခပ်ကျကျ အပိုင်းမှာနေတဲ့ ဘူထွားတစ် ယောက် ကိုပေါ့။ သူ့ပရိုဖိုင်း info မှာတော့ ဘော်ဒီက bear type တဲ့။ ဒါနဲ့သူ့ဆီ မေးလ်ပို့လိုက်ပြီး ဟိုသည် ဆိုက်တွေမွှေရင်းထိုင်နေ တဲ့ ခဏမှာပဲ သူ့ဆီက မေးလ်ပြန်လာပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ 'Daddy' ဆိုတဲ့ နာမ်စားနှင့် သုံးပြီးရေးသားထားသလို ကျွန်တော့်ကိုကျတော့ 'bitch' တဲ့လေ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လိမ္မာပါးနပ်စွာနှင့် တုန့်ပြန်မှုမလုပ်ဘဲ နေသင့်တာပါ။ သူက ဘာဓာတ်ပုံမှ ပို့ဖို့မလို ပေးထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ဒီညနေကျွန်တော်လာဖို့ ပဲလိုသတဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့တိုက်ခန်းကိုလာပြီး ဒစ်ကြီးကြီးကို ကောင်းကောင်းပြုစု မယ်လို့ အီစီကလီလုပ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲအလွန့်ကို ထကြွသောင်းကျန်းနေတာက -ီးတစ်ချောင်းကို စုပ်ချင်နေတာ။ ဘယ်သူရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အတွေ့အကြုံ အနေနဲ့ နည်းနည်းတော့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒစ်ကြီးကြီးကို လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်စုပ်မျိုတဲ့အခါ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ပူနွေးပျစ်ချွဲတဲ့အရည်တွေ နှုတ်ခမ်းတို့ လျှာတို့ပေါ်ရောက်ရှိတာ တော်တော်ဖီးလ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူတို့ ကျေနပ်သွားတဲ့ မျက်နှာတွေ ကိုမြင်ရတဲ့အခါပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရတာတော့အမှန်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးသန့်စင်လိုက်ကာ Daddy ရဲ့တိုက်ခန်းရှိရာကို ကျွန်တော့်အချစ်တော် Volvo ကားအ၀ါလေးမောင်းပြီး သွားခဲ့တာပေါ့။ သူပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်းရောက်သွားတော့ ကျွန်တော့်မူရင်းစိတ်အမှန်အတိုင်းဆို အဝေးကိုမောင်းထွက်သွားလိုက်မှာ။ တိုက်ခန်းကကြည့်ရတာ အဆင်မပြေသလို လုံခြုံစိတ်ချရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံလည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ မြို့ရဲ့အစွန် အိုဟောင်းသော တိုက် တန်းလျား အလင်းရောင်သိပ်မရှိတဲ့ တိုက်ခန်း။ စိတ်ကသာ အဝေးကိုကားမောင်းထွက်သွားချင်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်လက်တွေက ကားသော့ ကိုဖြုတ် ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲတောင် ထည့်ပြီးနေပြီ။ ပြန်လှည့်ဖို့ထက် စိတ်ထဲ ထကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့သွေးတွေက ရှေ့ဆက်တိုးနေစေ သည်လေ။
တိုက်ခန်းနံပါတ်ကိုကြည့် အခန်းတံခါးကို တစ်ချက် နှစ်ချက် သုံးချက် ခေါက်တာမှာ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မရခဲ့။ ဒါဟာသတစ်ခုလား? ကျွန်တော့်ကို ဟာသတစ်ခုအဖြစ်မြင်ခဲ့သလား? ကားဆီပြန်သွားဖို့ လှေကားထစ်ဆီ ခြေအလှမ်းမှာ တံခါးမကြီးက ဟလာပြီး အသံ ခပ်သြသြကိုကြားရတယ်။ 'အထဲကိုဝင်ခဲ့ကောင်လေး၊ ပြီးရင် မင်းအ၀တ်တွေ ချွတ်ထားလိုက်' အခန်းထဲ ခပ်တုန့်တုန့်ဝင်လိုက်တော့ ကျွန်တော်သတိထားမိရတာက အခန်းတစ်ခုလုံးဟာ စတူဒီယိုတစ်ခု။ တော်တော်သေးတဲ့အခန်းပဲ။ ညနေစောင်းပဲရှိသေးတာ ဒီအခန်းထဲ မှာတော့ မဲမှောင်နေပြီ။ ညမှာအလုပ်လုပ်ပြီး နေ့ခင်းကို အိပ်စက်ကြတဲ့ လူထင်ပါ့။ ရေချိုးခန်းထဲက မီးရောင် မလင်းတလင်းက ဧည့်ခန်း လား ဘာလားမသိတဲ့ အခန်းကြီးထဲ အလင်းရောင်ထိုးပေးနေရဲ့။ အခန်းထဲနောက်ထပ် အလင်းရတာက ကျွန်ပျူတာ မော်နီတာတစ်လုံး ကလာတာဗျ။ အခန်းထဲဝင်ဖို့ပြောတဲ့ ခပ်သြသြအသံက အဲဒီကွန်ပျူတာရှေ့ကြားရတာဖြစ်မယ်။
အခန်းထဲ မရဲတရဲဝင်ပြီး သူ့အမိန့်အတိုင်းအ၀တ်တွေ ကိုချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သတိထားမိရပြန်တာက အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် ကလွဲလို့ လူတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ။ 'Daddy' Daddy က တကယ့်ကို ၀က်ဝံကြီးလိုထွားကြိုင်းသူပါလား။ အသားအရေညိုမောင်း သလို အရပ်က ၆ပေကျော်မယ်။ ကျွန်တော့်အထင် ပေါင် ၂၀၀ကျော်မယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုင်ရှင်ပါပဲ။ အမွှေးအမျှင်ကလည်း သန်ပါ့။ စွပ်ကျယ်တစ်ထည်ဝတ်ထားပြီး အောက်ပိုင်းကတော့ boxer ဘောင်းဘီတိုကို ခပ်စုတ်စုတ်ဝတ်ထားတယ်။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာမှာ jockey ဘောင်းဘီနှင့်ခြေအိတ်တွေကလွဲလို့ အ၀တ်တွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Daddy က ခပ်ငေါက်ငေါက် အသံနှင့် ၀တ်ထားသမျှ အကုန်ဖယ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးတာ။ အဲဒါနဲ့ Jockey ဘောင်းဘီရော ခြေအိတ်ရော ချွတ်ပစ်ရတယ်လေ။ Daddy က ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားမှန်သမျှ အားလုံးစုကိုင်ပြီးနောက် ဘီရိုတစ်လုံးထဲထည့်ပြီးထည့်ပြီး ဘီရိုတံခါးကို သော့ခတ်ပစ်လိုက်ပါရဲ့။ နံပါတ် တွေလှည့်ပြီး ဖွင့်မှရတဲ့သော့ခလောက်နှင့် ခတ်ပစ်တာဗျ။ အခုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက အလွန်ကြောက်လန့်တာမျိုးပဲရှိတော့တယ်။ ဒီကနေ ကျွန်တော်ထွက်ပြေးသွားလို့လည်း မရတော့ဘူး။ အ၀တ်အစားတွေလည်းမရှိ ကားသော့ကလည်း ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီ အိတ်ထဲမှာလေ။ အခုသူ အကုန်လုံးဘီရိုထဲထည့် သော့ခတ်ပြီး သော့ကိုလည်းယူသွားပြီ။
Daddy က ဒူးထောက်ပြီး -ီးစုပ်ပေးလို့ စခိုင်းတော့လာပဲ။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အရာကို အခု အလျင်စလိုမလုပ်ဘဲ စတင်ရပါပြီ။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပဲရွေးချယ်ခဲ့ရမယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်တော့ပါဘူး စိတ်ထဲ cross ဖြစ်သွားပါပြီ။ Daddy ကျွန်တော့်ကို ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းကစားနေတာများ အောက်မေ့နေသလားမသိဘူး။ အ၀တ်တွေ ပြန်ပေးပါ ကျွန်တော်စိတ်မပါတော့ဘူး မလုပ်ချင်တော့ဘူးပြောဖို့..... ကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကိုအ၀တ်တွေ ပြန်မပေးတော့မှာ တစ်ခုခုများ သူလုပ်လိုက်မလား သူ့အားအင်ကြီးနှင့်လေ။ မနက်ကျောင်းသွားရဦးမယ်....ညအပြန်မိုးချုပ်ရင် မေမေတို့စိုးရိမ်နေကြဦးမယ်။ အခုမှ ကျွန်တော်ကြောက်လန့်စိတ် ပြင်းထန်လာပါ တော့တယ်။ကျွန်တော်အရူးပဲ စိတ်ကကြောက်လန့်နေပေမဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေက Daddy ရဲ့ အမြှောက်တံကြီးကို အားရပါးရကိုင်ကာ လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေက ကောင်းကောင်းပြုစုနေပါပြီ။ သူ့အမိန့်ကို လိုက်နာခဲ့ပြီလေ။ အခုအချိန်မှာ .....ဒစ်ကိုစုပ်နေချိန်မှာ ကြောက်စိတ်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ ။ ဒါကျွန်တော်လုပ်ချင်နေခဲ့တဲ့အရာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့လာခဲ့တာပဲလေ။
မုဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ကာ Daddy ရဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ဆွဲချလိုက်ကာ သူ့ငပဲကို နှုတ်ခမ်းဝမှာ အသာတေ့ရင်း မှုတ်တယ်။ ပျော့ပြောင်းနေ တဲ့ ငထွားကြီး မာလာပြီး ကျွန်တော့်လည်ချောင်းထဲ အတွင်းကျကျရောက်ဖို့ သူကြိုးစားတာပေါ့။ လည်မျိုထဲထိ ထည့်ထည့်ပြီး အသက်ရှူ မ၀အောင် သူလုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ကာ သူ့တင်ပါးကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားရင်း deep throat ပေါ့။ လျှာတွေ အာ တွေနှင့် ပြုစုနေရတာ အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာလာပြီလည်း သိလား မိနစ် ၃၀ကနေ မိနစ်လေးဆယ်။ ကျွန်တော့်မေးရိုးတွေ ငြောင်း ပါးစပ်လည်းနာလာပြီ။ Daddy ကတော့ သာယာနေတယ်ထင်ပါ့။ တစ်ချိန်လုံး သူ့ပါးစပ်က 'bitch' စကားလုံးချင်းမိုးမွှန်နေတာ။ စိတ်ထဲ က ရှက်သလို နာကျင်သလို ခံစားရနေပေမဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ ဒီအတွေ့အကြုံကိုကြိုက်နှစ်သက်နေတယ်။ Daddy ပြောသလို ကျွန်တော်ဟာ 'bitch' ။
အဆုံးမဲ့ စုပ်မှုတ်ပေးနေတာပြီးမယ့်ပုံမပေါ်သေးဘူး။ climax ဖြစ်ဖို့ နည်းကပ်လာပြီ....အား။ ကျွန်တော့်နားထင်ကို လက်နှင့်တစ်ချက် ခပ်ဆပ်ဆပ်ရိုက်ရင်း အိပ်ယာဆီလိုက်ခဲ့ဖို့ Daddy ကပြောပါတယ်။ သူ့နောက်ကိုအသာလိုက်သွားရသပေါ့လေ။ အိပ်ယာခုတင်စွန်းကို ရောက်တော့ လေးဘက်ထောက်ကုန်းကာ သူ့ခရေ၀ကို လျှာကျွေးခိုင်းပါရော။ ကျွန်တော် ဒီလို လုပ်ပေးရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုး တစ်ခါမှ မရှိဖူးဘူး။ လျှာကို ခပ်တောင့်တောင့်လေးလုပ်ကာ သူ့အမိန့်အတိုင်း ခရေ၀ကို မရဲတရဲတို့ထိပြီး ကစားရတယ်။မလွန်ဆန်နိုင်လို့သာ လျှာကစားပေးနေရတယ် အနံ့အသက်တစ်မျိုးရနေပါ့။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု မလုပ်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်မုန်းတယ်။ အခုတော့ မုန်း တာအသာထား လုပ်ပေးနေရပေါ့။ Daddy ခရေ၀၀န်းကျင်ကို နှုတ်ခမ်းတွေလျှာတွေသုံးပြီး ငပဲကိုပြုစုခဲ့ရသလို လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ် ထဲကြောက်ရွံ့နေတာတွေဟာ ငပဲကိုစုပ်ပေးခဲ့ချိန်တုန်းကလိုပါပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားကာ သာယာလာမိပါရောလား။ ကျွန်တော် အခုသိလာပြီ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်ရတာကိုလေ။ ဒီလိုအသုံးချခံရတာကိုပဲ ပျော်ရွှင်လာမိပြီ။ Daddy က bitch ခြင်းမိုးမွှန် အောင် ပါးစပ်ကခေါ်ကာ လုပ်ခိုင်းချင်ရာလုပ်ခိုင်းနေသောအဖြစ်ကို သဘောကျလာပြီပဲ။ သူပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အနေအထားက ဒီနေ့ အတွက် မှန်တယ်။ကြောက်လန့်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာ အဆုံးသတ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ဒီလိုလုပ်ပေးပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ပေးရဦးမှာလည်း ကျွန်တော်သိချင်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ပေးချင်နေတာ။
ကျွန်တော့်တစ်သက်များကြာသွားပြီလား ထင်ရချိန်ထိ သူအရသာခံတယ်လေ။ အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကျော်မယ်။ Daddy က ရပ်ဖို့ပြော တဲ့အချိန် ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့ ထရပ်လိုက်ကာ အ၀တ်တွေ ပြန်ပေးဖို့တောင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအ၀တ်ကိုပြန်တောင်းတဲ့ စကားသံ တောင် မဆုံးလိုက်ရပါဘူး။ ရေချိုးခန်းတံခါးပွင့်လာပြီး Daddy နည်းတူ ခပ်ထွားထွားလူရွယ်နှစ်ယောက် ထွက်လာတာကိုကြည့် ရင်း ကျွန်တော် ဆွံ့အသွားတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်လက်တွေ ဆွဲချုပ်ကိုင်ရင်း ဒူးထောက်နေခိုင်းရော။ Daddy အ ပြေးလေးရောက်လာကာ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာရပ် ပျော့နေတဲ့သူ့ငပဲကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ တစ်စက်မှ မဖိတ်စဉ်စေနဲ့တဲ့ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ရင် မင်းနာမယ် ဆိုပဲ။ ပထမတော့ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး သူဘာကိုဆိုလိုတာလည်းလို့။ အား...Daddy ....ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲကို သေးပေါက်ထည့်တာ။
စပ်ဆုပ်ရွံရှာဖို့ကောင်းသလို.....ညစ်ပတ်နံစော်ပြီး ထွက်ခွာဖို့ကြောက်လန့်နေရတဲ့အဖြစ်လေ။ ကျွန်တော်မရှောင်ဖယ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ အ၀တ်တွေမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်ကားသော့... ကားသော့လည်းမရှိဘူးဗျာ။ အိမ်နဲ့လည်း အလှမ်းဝေးလွန်းတယ်။ အခြားလူနှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုချုပ်ကိုင်ကာ ဒူးထောက်နေစေပြီး Daddy ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သေးပေါက် ထည့်တာကို ကြည့်ကာ အော်ဟစ်အားရနေကြတယ်။ကျွန်တော် ထွေးထုတ်ပစ်ဖို့ မကြိုးစားနိုင်သေးဘူး သူတို့ချုပ်ကိုင်မှုများကြား။ Daddy ရဲ့ သေးတွေကရွံရှာဖွယ်အတိ အရသာငံကျိကျိပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ သေးရဲ့အရသာခံကြည့်ခဲ့ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး ကိုယ့်ရဲ့သေး အပါအ၀င်ပေါ့။ အော့အံမိမလိုဖြစ်ပြီး အားလုံးထွက်ကုန်တော့မလို့ ဖြစ်သေးတာ Daddy တို့သုံးယောက်ရဲ့ မျက်လုံးပြူးကြီးများကြောင့် ပမာဏနည်းနည်းဖိတ်တာကလွဲလို့ တာဝန်ကျေခဲ့ရပါတယ်။
Daddy ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သေးပန်းထည့်ပြီးနောက် ကျန်နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ရှေ့ဆွဲယူကာ သူ့ အ လှည့်ပေါ့။ ကျွန်တော်ရုန်းကန်ပြီး လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ရှာပေမယ့် အချည်းအနှီးပါပဲ။ အဝေးကိုခွာလို့မရသလို လူသားဆီးသွားခွက် အဖြစ် အတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းခံရပါတယ်။ ကြွေကမုတ်မဟုတ်သော သက်ရှိလူသားလေ။
သူတို့အားရအောင် ဆီးသွားပြီးတော့ ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်ပေါ် ခြေကုန်လက်ပန်းကျသလိုမျိုး ပုံရက်သား။ ဒါကို မညှာမတာ ကျွန်တော့် ချိုင်းကြားကနေ မကာ ရေချိုးခန်းဆီဆွဲခေါ်သွားတယ်။ နောက်ထပ်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို လေးဘက် ကုန်းစေကာ ချယ်ရီပေါက်လေးကို လျှာကျွေးပါရော။ အခြားတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကို ရွှေနီငှက်ပျောအလား ထွားလှတဲ့ -ီးတံ ကြီးကို အတင်းထိုးတည့်ပါတယ်။အသက်ရှူမ၀တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင် ရှေ့ကလူက အသွင်းအထုတ်လုပ်နေသလို နောက်ကလူက လည်း လျှာကျွေးရုံမကျေနပ်တော့ဘဲ လက်ချောင်းတွေနဲ့နှိုက်ဖို့ ကြိုးစားတာဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဖီးလ်မလာတော့ သလိုမျိုးခံစားရကာ နှိပ်စက်မှုငရဲခန်းထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မျက်စိကိုဘေးအကြည့်ရွှေ့လိုက်တာ ရေချိုးခန်းနံရံက မှန်ချပ်တွေကတစ်ဆင့် Daddy ငြိမ်နေရခြင်းအကြောင်းကိုသိသွားရပါပြီ။ ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်လုံးနှင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက မှတ်တမ်းတင် နေခြင်း ကြောင့်လေ။ သူ့ပေါင်ခြံက ငပဲကလည်း မိုးပေါ်ကိုထောင်လို့။
'အား....အား....သေပါပြီ' လက်ချောင်းတွေနှင့် ခရေ၀ကိုချဲ့နေတဲ့လူက ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ချောဆီမဆွတ် သူ့လဒစ်ကိုဖိပြီးအဆုံးထိ သွင်းပစ်လိုက်တာ။ တရစပ်ဆောင့်ချက်များကြောင့် နာကျင်ရသလို ကော့ကော့သွင်းလိုက်တဲ့ သူ့ဟန်တစ်မျိုးကြောင့်လည်း စိတ်ထဲက ဟာတာတာ။ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲက တစ်ဆင့်လည်မျိုထဲရောက်ရောက်လာတဲ့ ငပဲဟာလည်း အထုတ်အသွင်းခပ်မြန်မြန် လုပ်စေချင် သတဲ့။ Daddy....ဘာလုပ်သလဲ? ကင်မရာကို ထောက်တံမှာအသာတင် လေးဘက်ထောက်ကာထားတဲ့ ကျွန်တော့်ဝမ်းဗိုက်အောက် ခေါင်းဝင် ကာကျွန်တော့်ညီဘွားကို အစကနေ အဆုံးထိမျိုချသွင်းစုပ်လိုက်တယ်လေ။
တစ်ခါမှ တစ်ခါဖူးမျှ ဒီလိုဖီလင်မျိုးမရဖူးဘူး။ ရှက်ကြောက်နာကျင်ထိတ်လန့်မှုနှင့် ရင်ခုန်မှုရောစပ်နေတဲ့ဖီလင်ကိုလေ။ တစ်ချက်နှစ်ချက် ဆက်တိုက်ဆောင့်သွင်းမှုကြောင့် နာကျင်စွာ ခါးကိုကော့မိချိန်မှာ လည်ချောင်းထဲကိုငပဲရှည်ရှည်ကြီးက တိုးတိုးဝင်လာတယ်။ ဒီအချိန် Daddy ရဲ့ပါးစပ်က ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေထိ ကစားနေတာ။ သိပ်တော့မကြာဘူး..... မထိန်းနိုင်တဲ့ ကျွန်တော် မိနစ်အနည်းငယ်မှာပဲ Daddy ရဲ့ပါးစပ်ထဲ စိတ်လှုပ်ရှားစွာပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပီးသွားမှန်းလည်းသိရော ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှဲစေလိုက်ကာ Daddy တို့သုံးယောက်ရဲ့ အလှည့်ကျသောင်း ကျန်းမှုကို ကျွန်တော် ခံစားရတော့တာပါပဲ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မုန်းတယ်၊ အသုံးချခံပစ္စည်းအသွင် သူတို့အလိုကျဆက်ဆံခံနေရတာတွေ ကို မုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့....သည်းမခံနိုင်လောက်စွာ မုန်းနေစဉ်မှာပဲ ဒီလိုဆက်ဆံရတာကို သာယာစပြုလာတာ ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ အရိုက်ခံ နေရတာတွေကို ကျေနပ်စပြုလာတာ အစွမ်းကုန်နှိုးဆွခံရတာတွေကို ပျော်ရွှင်မိနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလို မာတောင်ပြီး ကြီးထွားနေတာ မဖြစ်ဖူးဘူး။
ပါးစပ်ကလည်း အားရပါးရ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်အော်မိရသလို သူတို့တွေကိုလည်း ကုတ်ခြစ် ထုရိုက်မိတယ် သဘောကျ။ သူတို့တွေ ကလည်း စတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လှုပ်ရှားလိုက်ကြရင်း ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ကိုဆွဲထူလိုက်ကာ ဒူးထောက်ထိုင်စေပါတယ်။ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဟခိုင်းကာ သူတို့ကိုယ်စီဗုံတံခေါက်ကြပြီး သကာလ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်များစွာကို အလှည့်ကျ ပန်းထည့် ပါရော။ အား....Daddy အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေ ရင်ဘတ်တွေပေါ် စီးဆင်းကုန်တာ။
သူတို့စိတ်ကြိုက် ပန်းထုတ်ကြပြီးချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်က ကင်မရာကိုသိမ်းဆည်း၊ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုမြောက်ကနဲ ပွေ့ချီကာ ရေချိုးခန်းအပြင်ဘက် ခေါ်လာပါရော။ ကဘီရိုတံခါးကိုဖွင့်ပေးတော့ ကျွန်တော်ခပ်မြန်မြန် ပစ္စည်းတွေအားလုံးယူကာ သွက် သွက်ဝတ်ဆင်ရတယ် အ၀တ်တွေ။
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲနှုတ်ဆက်ရမလား? ဒီအတိုင်းထွက်ခွာရမလား? ဝေခွဲမရဘဲ Daddy တို့ထိုင်နေတဲ့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ 'နက်ဖြန် ဒီအချိန်လောက် ငါတို့တိုက်ခန်းကိုပြန်လာခဲ့ကောင်လေး..။ မင်းသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆို တာပြမယ်'
ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ တံခါးကနေ ခပ်သွက်သွက်ထွက်လိုက်ကာ မဲမှောင်နေတဲ့ တိုက်ခန်းကနေ ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ် လှေကားထစ် များမှတစ်ဆင့်။ ကျွန်တော့်ကားရှိရာဆီလှမ်းလာရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာ၊ ဆံပင်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်မိတယ်။ ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တစ်ချို့ တွယ်ကပ်နေဆဲ။ ဝေါ့...ဝေါ့ ရေမြောင်းတစ်ခုနားသွားအန်လိုက်မိတယ်။ အားရသွားတော့မှသာ ကားကိုမောင်းထွက် အိမ်ကို ရွေ့လာမိ တော့တာပေါ့လေ။
ကားပြတင်းမှန်က တစ်ဆင့်လေပြည်လေးတွေ တိုးဝင်လာမှုကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ပြန်လည်ကြည်လင်လာရတယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ တွေက ကျွန်တော့်အပြစ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုမူခဲ့တဲ့အရာရဲ့ ရလာဒ်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုဆက်ဆံခံရသလဲ....တန်ဖိုးမရှိစွာ ......အား.....။
အိမ်ဘက်သွားတဲ့လမ်းကိုအကွေ့ ကားနောက်ကြည့်မှန်ကတစ်ဆင့် မြင်လိုက်ရတာက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများပါ။ ကျေနပ်အားရစွာ အစာ ၀နေတဲ့ ရွှင်မြူးရိပ်က အထင်းသား...။